स्तन आकर्षक बनाउन चाहनुहुन्छ ? – Himalaya TV
Home » मनोरञ्जन » स्तन आकर्षक बनाउन चाहनुहुन्छ ?
स्तन आकर्षक बनाउन चाहनुहुन्छ ?
६ चैत्र २०७३, आईतवार २१:५१
काठमाण्डौ, ६ चैत्र । कस्लाई नहोलार सुन्दर हुने चाहना, विशेषगरी महिलाहरु यसमा बढि चासो दिने गर्दछन् । यो स्वभाविक पनि हो । किनकि महिहरुलाई सौन्दर्यको प्रतिक पनि मानिन्छ ।
महिलाहरु विशेषतः आफ्नो शारीरिक बनावटलाई लिएर चिन्तित हुने गर्दछन् । फलस्वरुप एकले अर्काको शरीरिक बनावट हेरेर आफूलाई दाँज्ने गर्दछन् । आफ्नो भन्दा अरुको पुष्ट शरीर देखेर मनमा जलन हुनु पनि स्वभाविक नै हो ।
महिलाको स्तन पनि एक आकर्षक अङ्ग मध्येको एक हो । धेरै महिला स्तन सानो भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने गर्दछन् । विभिन्न देशमा गरेको अध्ययनमा स्तनलाई आकर्षक बनाउन केहि घरेलु उपाएहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
लामो समय घोप्टो परेर सुत्दा तपाईको स्तनको आकारमा परिवर्तन हुनुका साथै स्तन टेडो हुन सक्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रिका इल्सइभियरका अनुसार म्याट्रिसमा केही घन्टा दबार राख्दा तपाईको स्तनहरुको लिगामेन्ट्स अर्थात कोषिका र नशाहरु तन्किन्छन जसले गर्दा तपाईको स्तन भद्दा देखिन्छ ।
बारम्बारको प्रयोगपछि ब्रामा राखिएको रबर तन्किने गर्दछ । हेल्थ नामक एक जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार झोल्लिएको ब्रा लगाउदा स्तन, घाँटी, र काँधमा पीडा हुन्छ । तसर्थ तपाईले ब्रा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ज्यादै कसिलो ब्रा भने लगाउनु हुँदैन ।
अहिले टाटुको क्रेज महिलाहरुमा पनि देख्न सकिन्छ । हात, पाखुरा, खुट्टा मात्र नभएर संवेदनशिल अंगमा पनि टाटु खोपेको पाइन्छ र यो हानीकारक पनि छ । स्तनमा टाटु खोप्दा संक्रमण, व्लिड्रि, नसामा नै अशर गर्ने लगायत विभिन्न एलर्जी हुने गर्छ । अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल डर्मेटोलोजीमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार स्तनमा छेड्दा हेपटाइटिस बी र सीको संक्रमण हुन्छ ।
स्तनमा मासु पलाएमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यदि स्तनमा सानो डल्ला वा गाँठो देख्नुभयो भने तत्काल सम्बन्धित विज्ञको सहयोगमा उपचारको बाटोतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । एजेन्सी